Skateboards zombane Ngaba Yenza Riders Flying - Jomo Technology Co., Ltd
Skateboards zombane Ngaba Yenza Riders Flying
Xa kwabonakala imifuziselo eziziiprayimari ezifumanekayo ezivenkileni, babenikelwe kuphela bekumele ukuba kusetyenziswa izithuthi lomthonyama, ukuba olukhulu xa wayefuna ukuya endlwini umhlobo, kwisikolo samabanga aphakamileyo, okanye ezinye beya. Le Rubber electric ekhawulezayo iza kusisithintelo disc angasemva, amavili omkhulu indlela womoya yaye sisebenzisa brushless Hub Motor 350W * 2 no 20pcs18650 iiseli lithium rate High betyhila kwidolophu yakho nale phakathi aphantsi design gravity! Ngoxa Nngokobuchwepheshe, likwazi ukwenza utshintsho iibhetri, loo nto setup swappable kushushu, ngoko kengoku ngokoqobo ukuba izivalo ngepakethe ukuba ufake enye kraca elitsha. Ngokomgaqo-amandla, kukhangeleka ngathi ukuze apakishe kakuhle kakuhle Punch njengoko Unakho ukufikelela ngezantya phezulu 26mph. Kwenza ukusetyenziswa manta Drive ukwazi engasebenzisi lizilungiselela okanye namabhanti. Kuba yenzelwe ukusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zokusebenzisa, ukuba ephakeme abafuna mnandi ekufuneka ukufikelela ngezantya kakhulu kwi zokusebenzisa yimikhuba.
Xa indlela yokuya ekhawulezileyo moya phezulu iinduli, ukuba phezulu ubungakanani wempambano ombane zenjini enkulu iya lonke ixesha win, kodwa ufuna Rubber bakho ukuba bajonge kunye namava ngathi enye ngempumelelo. Kodwa ke, ukuba ungathanda i Rubber yombane ukuba incinane, inobulali, kunye neendleko xa kuthelekiswa neminye iminyaka, i Roto-band (KOOWHEEL uphawu) Rubber zombane uyazikhethela kakhulu ngoku. I Roto-band Rubber online shop wosondeza uthotho kuni hoverboard yombane , kuquka ukuzeyisa ezimbini wheel balancing isithuthuthu , yokusonga scooter sombane kunye ishushu iivili ezine longboard yombane . Ngoku ukuba siyifumene yonke esiyintshayelelo yinxalenye endleleni, siza ukuhlola i umgangatho ophezulu kunye nokusebenza elihle skateboards zombane efumaneka phandle phaya, uze ubone ixabiso libiza kwi Roto-band Mall.
Uninzi lwezi entsha hoverboard sombane balawulwa yi ekude, Bluetooth elikude, nto leyo ikunceda kukhawuleziswe okanye waziqhekeza kunye thumbwheel enobuchwepheshe, kwaye kwakhona iye LED izikhombisi ebonisa indlela juice iqashiso usenokuba ndozishiyela Rubber yakho yombane. Enye inemisebenzi apholileyo Roto-band ( Koowheel ) kukuba app wayo kuvumela abakhweli ukuba endaweni firmware lebhodi ngaphandle ngendlela Bluetooth. Kakade ke, lo khetho crude kakhulu yokulinganisa intsebenzo ukuba ungathi umgangatho ebhodini kunye iinketho zeebhodi azizange ingqalelo.
ixesha Post: Mar-15-2018
© Copyright - 2015-2021: All Rights Reserved. Power ngu Koowheel.com